झापाको दमकमा घरमै वे,श्या,वृ,त्ति : ८ महिलाकाे उ,द्धा,र, दुई प,क्राउ – Gorkhali Dainik
झापाको दमकमा घरमै वे,श्या,वृ,त्ति : ८ महिलाकाे उ,द्धा,र, दुई प,क्राउ
March 31, 2021 591
झापा, १८ चैत । दमक नगरपालिकाबाट महिलालाई घरमै राखी वे,x श्या, x वृ, x त्तिमा लगाउँदै आएका दुई महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा मोरङ पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–३ की ३८ वर्षीया उर्मिला नेम्वाङ र इलाम चुलाचुली गाउँपालिका–४ बस्ने ३८ वर्षीया नन्दिता लिम्बू रहेका छन् ।
उनीहरुलाई दमक नगरपालिका–६ स्थित नयाँ सब्जीमण्डीमा घरभाडामा लिएर वेश्यावृत्ति गराउँदै आएको विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । सोही घरबाट आठ जना १७ वर्षदेखि ३९ वर्ष उमेर समूहका महिलाको समेत प्रहरीले उ, द्धा, र गरेको छ । उद्धार गरिएका सबैलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुई महिलालाई यही चैत १५ गते प्रहरी प, क्राउ गरेको थियो । प, क्राउ परेका दुवै महिलालाई मानव बे, x च, x वि, x ख, x नविरुद्धको मु, x द्दा दर्ता गरी जिल्ला अदालत झापाबाट म्याद थप लिई अ, x नु, x स, x न्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता राकेश थापाले बताउनुभयो ।
Prevभर्खरै आयो यस्तो ड’रलाग्दो खबर नेपाल अब उच्च जोखिममा, नेपालमा बज्यो खतराको घण्टी
Nextघरबाट कलेज जान नि’स्किएकी यु’वती बाटोमा मृ’त भे’टिन !
हराएको २ महिना पछि शारदा र ८ वर्षका छोरा बारे आयो खबर…!
जन्मेको पाँच दिन मात्र भएको बा’लकको को’रोनाले लि’यो ज्या’न’…..!